Halkee laga Iibsan karaa Shahaadada PhD -da onlayn? 2022
July 17, 2021 Okpara Francis
Xagee laga iibsadaa Shahaadada PhD-da ee internetka?
Caannimada sii kordheysa ee barnaamijka PhD-da ee khadka tooska ah, qaar badan ayaa hadda la yaaban halka laga iibsado shahaadada PhD-da ee khadka tooska ah.
Baahida sii kordheysa ee darajooyinkan dhakhaatiirta ayaa daliil cad u ah in dad badan ay hadda raadinayaan guusha tacliimeed iyo shaqo ee kaliya ay bixin karto Shahaadada PhD-da ee Online-ka ah. Waxa intaa ka sii adag ayaa kala shaandheyn ku sameeya tirada aan la tirin karin ee dugsiyada internetka ee bixiya shahaadooyin dhaqtarnimo oo kala duwan
Intaa waxaa sii dheer, inbadan oo aad kala dooran karto, sidee ku ogaan kartaa iskuulka internetka midka ugu fiican shuruudahaaga? Jawaabtu waxay ku jirtaa marka hore inaan miisaamo faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka barnaamijka aad rabto inaad iska qorto.
Waxaa muhiim ah in la xusuusnaado in sababtu ha ahaato sababaha aad u doonayso shahaadada Master-ka ee khadka tooska ah, waa inaad had iyo jeer doorataa dugsi bixiya aqoonsi sumcad leh oo tiro aad u tiro badan oo arday ah ay ku gaareen himilooyinkooda waxbarasho iyagoo kaashanaya barnaamijyadan shahaadada PhD-da ee internetka.
Marka sidee loo qiimeeyaa mudnaanta dugsi kasta oo bixiya barnaamijyada shahaadada PhD ee shahaadada internetka? Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ogaato Halkee looga Iibsan karaa Shahaadada Phd Online laga bilaabo. Waxaa jira dhowr arrimood oo muhiim ah oo laga fiirsado markaad dooraneyso iskuul adiga kugu habboon. Shahaadada dhakhtar ee internetka ee la aqoonsan yahay ayaa ah mid aad u muhiim ah.
Sidaas darteed waa inaad hubisaa in dugsigaaga mustaqbalka la aqoonsan yahay ka hor wax kasta oo kale.
Aynu eegno qodobbada ay tahay inuu tixgeliyo inta aad iibsanayso shahaadada PhD:
Qodob kale oo ay tahay inaad tixgeliso markaad raadineyso shahaadada khadka tooska ah waa qaabka bixinta.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto khibrad waxbarasho oo shaqsiyeed, ka dibna raadi dugsi la aqoonsan yahay oo bixiya casharro shaqsiyeed ama qaybo ku habboon baahiyahaaga waxbarasho iyo waqtigaaga. Sidan, markaad u fariisato imtixaannadaada, waad diyaarin doontaa.
Qaabka gaarsiinta ayaa sidoo kale tilmaamaysa tayada waxbarasho ee aad heli doonto. Iyada oo leh shahaadada internetka, waxaad marin u heli doontaa ilaha ugu fiican ee la heli karo.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad barato dhinacyo kala duwan oo xirfaddaada ah, sida cilmi baarista, isgaarsiinta, iyo maamulka, markaa macno ayey leedahay inaad u tagto barnaamijka shahaadada sare ee shahaadada sare ee shahaadada sare Haddii aad doorato inaad ku kasbato aqoonta barashada masaafada, waa inaad hubisaa inaad shahaadooyinkaaga ka heshay iskuul lagu kalsoonaan karo oo sumcad wanaagsan leh.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la tixgeliyo noocyada modules ee aad ku qaadanayso internetka. Tusaale ahaan, haddii aad ku kasbato dhakhaatiirtaada qadka tooska ah, waa inaad qaadataa qaabab diiradda saaraya qaybtaada waxbarasho ee gaarka ah.
Haddii aad doorato inaad iska qorto jaamacad dhaqameed, markaa waxaa jira maaddooyin kala duwan oo aad kala dooran karto. Si kastaba ha noqotee, shahaadada khadka tooska ah, waxaa lagu siin doonaa oo keliya maadooyin la xiriira aagga aad dooratay ee daraasadda.
Sidoo kale waa inaad fiirisaa Aqoonsiga dugsiga. Aqoonsigani waa mid aad muhiim u ah. Sidii hore loo soo sheegay, waxay hubisaa in dugsigu buuxiyo heerarka suuqa waxbarasho ee hadda jira.
Sidaa awgeed, haddii dugsigaaga aan la aqoonsanayn, waa inaad ku joojisaa waxbarashaddaada halkaas oo aad ka raadsataa xarun kale.
Aqoonsigu muhiim uma aha oo kaliya dugsiyada internetka laakiin sidoo kale jaamacadaha caadiga ah. Loo-shaqeeyahaaga mustaqbalka kuguma aqbali doono shahaado kulliyad ama jaamacadeed oo aan haysan aqoonsi sax ah.
Reader dib u eegista
Markaad isku dayeyso inaad ogaato halka aad ka iibsanayso shahaadada PhD, hubi in xayeysiisyada si wanaagsan loo farsameeyay aysan ku khiyaanayn.
Waxaad ka hubin kartaa bogga internetka ee dugsiga aad rabto inaad iska diiwaangeliso oo aad ka raadsato markhaati iyo dib u eegis ardaydii hore.
Warka wanaagsani waa in jaamacado badan oo caan ah oo internetka ah ay bixiyaan shahaadada Master-ka ee buuxa ee internetka sidoo kale. Sidaa awgeed, waa inaadan ka horjoogsan halka aad ka iibsaneyso shahaadada dhaqtarka, laakiin aad xoogga saartid halka ay jaamacadda internetka ka bixiso manhajka ugu fiican iyo habka ugu wanaagsan ee maaddada loo dhigo.
Barnaamijka internetka ee PhD waa mid aad u jaban oo la heli karo marka la barbar dhigo jaamacadaha caadiga ah. Sidoo kale, shahaadada khadka tooska ah, waxaad wax ku baran kartaa xawaarahaaga.
Ka dooro machad caan ah
Tixgelin kale oo muhiim ah oo lagu dooranayo shahaadada PhD waa sumcadda dugsiga internetka. Ka soo qaad in dugsigu sumcad wanaagsan leeyahay oo loo arko inuu sumcad ku leeyahay jaamacadaha dhexdooda.
Xaaladdaas, waxaad ka fiirsan kartaa inaad ku socoto manhajkooda koorso oo aad aragto haddii maadada aad xiisaynayso lagu barto halkaas. Jaamacado badan oo khadka tooska ah kuyaala ayaa lagu sameyn doonaa qiimeyn dibadeed kahor inta aysan shahaadada siinin ardaydeeda.
Waxaad ka hubin kartaa wakaaladan dib-u-eegista dibedda oo aad ka ogaan kartaa in jaamacadda laga aqoonsan yahay adduunka.
Xusuusnow, shahaadooyinka khadka tooska ah kuma yimaadaan si fudud, markaa waa inaad ka taxaddartaa doorashadaada. Iibsashada shahaadada PhD-da ee khadka tooska ah waxay ku xirnaan doontaa nooca shahaadada aad rabto inaad raacdo ka dib markaad dhammayso waxbarashadaada.
Dib u eegis 1A damaanadqaaday
Previous Post:Ahmiyada Kordhinta Xirfadaha leh Shahaadooyinka Internetka
Post Next:Sida Si Deg Deg Ah Loo Barto Qorista Qalad La'aan - 3 Talooyin Oo Fudud